IXiangya Hospital Central South University - iShenzhen Doneax Science and Technology CO., LTD
IXiangya Hospital Central South University
Isungulwe e-1906 futhi itholakala e-Changsha, i-Xiangya Hospital Central South University iyisibhedlela jikelele i-Class-A Grade-3 (ezingeni eliphezulu e-China) ngaphansi kweso elibhekiswe ngqo kwi-National Health Commission, isibhedlela esihambisanayo se-Central South University ngqo ngaphansi koMnyango we Ezemfundo.
Ukumboza indawo esezingeni eliphansi lamamitha skwele angama-510,000 futhi kunemibhede eyi-3,500 ebhalisiwe. Kuneminyango yobuchwepheshe bemitholampilo kanye neyezokwelapha engama-88 kubandakanya neminyango ekhethekile, amawadi eziguli ezingama-76 kanye namayunithi abahlengikazi ayi-101. Inemikhakha eyisihluthulelo eyisi-7 yezinga likazwelonke kanye nobuchwepheshe bemitholampilo obukhulukazi obusezingeni likazwelonke abangama-25, obunamakhono amaningi asezingeni eliphakeme eChina ngokuya ngamazinga okuxilongwa nokwelashwa kanye nomthelela wesayensi nobuchwepheshe, njenge-neurology, i-neurosurgery, i-dermatology, i-orthopedics, ukuphefumula imithi, geriatrics，futhi yisikhungo sokucwaninga ngemitholampilo sikazwelonke se-geriatrics. Ifakwe inqwaba yemishini yezokwelapha esezingeni eliphakeme efana ne-PET-CT, i-MRI, i-digital subtraction angiography (DSA), i-TOMO, uhlelo lwe-BrainLab neuronavigational, igumbi lokuqala lokusebenza le-Buzz digital e-Southeast Asia, njll., I-Xiangya ihola izwe ngokwemigomo izimo zokuxilonga nokwelashwa namazinga. Ngemfundo ephelele yezinga eliphakeme kanye nohlelo oluqhubekayo lwemfundo lokuqeqeshwa okulinganiselwe kwabafundi abangaphansi kweziqu zezokwelapha, abafundi abaphothule iziqu, abafundi abavakashela, nodokotela abahlala khona NgoJuni, 2020, kwakhethwa ohlwini lwezikhungo zezokwelapha nezempilo ezenza inoveli ye-coronavirus nucleic acid test esifundazweni saseHunan.
Isistimu yezempilo kazwelonke ehlanganisiwe, isibhedlela esiphezulu sikazwelonke, umsebenzi wesayensi wezwe lonke uthuthukile, ukwakhiwa okuhlanganyelwe kukazwelonke kwesiko lesibhedlela, ukuhlangana kukazwelonke okuthuthukile, abantu bakazwelonke bathembela esibhedlela isibonakaliso sokwakhiwa kokuthuthukiswa, abesifazane abahlengikazi uhlelo lwempilo kazwelonke lweWen Minggang, oluphakeme insiza yabahlengikazi esezingeni eliphakeme, impucuko yentsha kuzwelonke, isibhedlela sikazwelonke sokuqamba izinto ezintsha, isibhedlela sezikhali esaziwa kakhulu e-3.